Nolosha Abaaraha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
«Masiixu wuxuu u yimid inuu iyaga u keeno nolol - nolol buuxda» (Yooxanaa 10:10). Miyuu Ciise ballan qaaday noloshu taajirnimo iyo barwaaqo ku jirto? Ma saxbaa in welwelka adduun lagu hor keeno Ilaah oo laga dalbado isaga? Hadaad haysato alaab badan, ma iimaan badan leedahay maxaa yeelay barako ayey leeyihiin?
Ciise wuxuu yidhi, Iska eega oo iska jira damacyada oo dhan, maxaa yeelay qofna kama noola inuu haysto alaab fara badan » (Luukos 12,15). Qiimaha nolosheena laguma cabiro sida ay tahay maalkayaga maaliyadeed. Taas bedelkeeda, halkii aan ka barbar dhigi lahayn waxyaabahayaga midkeenba midka kale leeyahay, waa inaan marka hore raadinaa boqortooyada Ilaah oo aan ka walwalin daryeelka adduunyada (Matayos 6,31: 33).
Bawlos gaar ahaan wuxuu aqoon u leeyahay ku noolaanshaha nolol buuxda. Iyadoo aan loo eegin inuu ahaa mid la ceebeeyay ama la amaaney, calooshiisa waxaa ka buuxsamay ama faaruq ahaa, wuxuu ku dhex jiray bulshada dhexdeeda ama kaligiis wuu xanuunsaday, wuxuu had iyo jeer ku qanacsan yahay oo Ilaahay uga mahadnaqayaa xaalad kasta (Filiboy 4,11-13; Efesos 5,20). Noloshiisa waxay ina tuseysaa inaan helno nolol aad u badan iyadoo aan loo eegin xaalada dhaqaale iyo shucuurta ee nolosheena.
Ciise wuxuu noo sheegayaa sababta uu u yimid dhulkaan. Wuxuu ka hadlayaa nolosha buuxda iyo micnaheeda nolosha weligeed ah. Odhaahda "ilaa ugu buuxda" asal ahaan waxay ka timid Giriig (gr. perissos) oo macnaheedu yahay 'sii wadid; inbadan; wixii ka dambeeya guud ahaan dadka oo dhan ”oo loola jeedaa erayga yar ee macno darrada ah« nolosha ».
Ciise kaliya ma ballanqaado nolosheena mustaqbal buuxa, laakiin durbaba wuu ina siiyaa hadda. Joogitaankiisa ayaa nagu sii kordhinaysa wax aan lagaran karin jiritaankeenna. Sababta oo ah jiritaanka nolosheena, nolosheena kaliya waxay noqotaa mid u qalma in lagu noolaado tirooyinka ku jira akoonkeena akoonka ayaa u gudbaya asalka.
Yooxanaa cutubkaaad, wuxuu ku saabsan yahay adhijirka kaasoo ah wadada keliya ee aabbaha. Muhiim ayey u tahay Ciise inuu xiriir wanaagsan oo wanaagsan la yeesho Aabbahayaga jannada ku jira, maxaa yeelay xiriirkani waa aasaaska nolol buuxda oo ku filan. Kaliya uma badbaadin karno nolosha weligeed ah xagga Ciise, laakiin waxaan mar hore ku dhisi karnaa xiriir dhow oo aan la lahaan doonno Ilaah xagga isaga.
Dadku waxay la wadaagaan maal xoolo iyo maal iyo barwaaqo, laakiin Eebbe wuxuu ina tusiyaa aragti kale. Noloshiisu aad bay noogu badan tahay jacayl, farxad, nabad, dulqaad, naxariis, roonaan, iimaan, qabownimo, is-xakameyn, naxariis, is-hoosaysiin, is-hoosaysiin, xoog dabeecad, xigmad, xamaasad, sharaf, rajo-gelin, isku-kalsooni, daacadnimo iyo wixii ka sarreeya dhammaantood xiriir cilaaqaad la leh isaga. Kuma helaan nolol kufilan maalkooda, laakiin waxaa siiya Ilaahay haddii aan u oggolaano inaan siinno hadiyado. Inbadan oo aad qalbigaaga u furtid Ilaah, noloshaada ayaa sii badnaan doonta.